बारामा ४ वटा मतदान केन्द्रको मतदान रद्द गरि स्थगित, चाँडै पुनः मिति तोकिने « News24 : Premium News Channel
बारामा ४ वटा मतदान केन्द्रको मतदान रद्द गरि स्थगित, चाँडै पुनः मिति तोकिने
पचरौता (बारा) । बारा जिल्लाको पचरौता नगरपालिकामा रहेका चारवटा मतदान केन्द्रको मतदान रद्द गरि स्थगित गरिएको छ । नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार तथा कार्यकर्ताहरुले मतदान अधिकृतलाई हातपात गर्दै मतदान केन्द्र नियन्त्रणमा लिएर मत खसाएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । त्यसपछि मतदान स्थगित गरिएको पचरौता नगरपालिकाका निर्वाचन अधिकृत नीरबहादुर दाहालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पचरौता नगरपालिकाको वडा नं. २ र ४ को चारवटा मतदान केन्द्रको मतदान रद्द गरि स्थगित गरिएको हो । पचरौता नगरपालिकाको वडा नम्बर २ मा रहेको बरगाछी मतदान केन्द्र र श्रीनगर बैरिया प्रा.वि. मतदान केन्द्रको मतदान रद्द गरिएको छ भने वडा नं. ४ स्थित बेलदारी प्रा.वि. मतदान केन्द्र (क) र (ख) को मतदान पनि रद्द गरिएको निर्वाचन अधिकृत दाहालले जानकारी दिए ।
नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरुले बुथ नै कब्जा गरेर मत खसालेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले चार वटै मतदान केन्द्रको मतदान रद्द गरेको हो । शुक्रबार रद्द भएका चार वटै मतदान केन्द्रको पुनः मतदान हुने मिति चाँडै तोकिने निर्वाचन अधिकृत दाहालले बताए । झडप नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले दुई दर्जन अश्रुग्यास पनि चलाएको थियो ।
१६ वटा स्थानीय तह रहेको बारा जिल्लामा विहानै मतदान शुरु भएसँगै तीनवटा पालिकामा विवाद उत्पन्न भएको थियो । मतदान शुरु भएको केहीबेर पछि नै सिम्रौनगढ नगरपालिका, पचरौता नगरपालिका तथा देवताल गाउँपालिकामा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
विवाद उत्पनन भएका तीनवटा पालिकामा मध्ये २ वटा पालिकाको मतदानलाई पुनः सूचारु गरि सम्पन्न गरिएको छ भने पचरौता नगरपालिकाको ४ वटा मतदान केन्द्रको मतदान रद्द गरिएको हो ।